Geerida Abwaan Baarleex: Hadda ayaan ogaaday inuu sagootin ahaa eray uu igu yiri intii aan la qaadin ka hor | Biyoguurenews.com
Home Wararka Geerida Abwaan Baarleex: Hadda ayaan ogaaday inuu sagootin ahaa eray uu igu...
Geerida Abwaan Baarleex: Hadda ayaan ogaaday inuu sagootin ahaa eray uu igu yiri intii aan la qaadin ka hor
Abwaan Cabdillaahi Xirsi Ibraahim, oo ku magac dheeraa Baarleex, waxa uu Alle ha u naxariistee ka mid ahaa sugaanyahannada ay sida weyn u yaqaaneen guud ahaan dadka Soomaaliyeed, wuxuuna taariikh lama illoobaan ah ku lahaa fanka.
Baarleex oo ay da’diisu ahayd 65 ilaa 66 sano ayaa ku dhashay magaalada Qorraxay ee hadda ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya.
Shalay ayuu ku geeriyooday waddanka Hindiya, halkaasoo looga daweynayay xanuun dhinaca wadnaha ah oo uu in muddo ahba la il darnaa.
Abwaan Xirsi Dhuux Maxamed, oo ah guddoomiye ku xigeenka golaha abwaannada Soomaaliyeed, wuxuu ka mid yahay dadka sida fiican u yaqaannay abwaan Baarleex.
Isagoo ku sugan magaalada Muqdisho ayuu BBC-da uga warramay waxa uu ka garanayay dabeecaddiisa wuxuuna yiri: “Suugaanta Soomaalida wuxuu uga jiray door shariif ah. Abwaannadu way kala yihiin oo qof wuxuu soo qortaa soona diyaarsadaa suugaantiisa, midna waa gole ka yeer oo wax walba isla goobta uu kula kulmo ayuu ku allifaa suugaantiisa. Marka Abwaan Baarleex wuxuu ahaa nin gole ka yeer ah oo gabayada dusha ka tiriya, hibo gaar ahna uu Alle siiyay”.
Deegaanno ka tirsan dhulka Soomaalida Itoobiya, Magaalada Hargeysa iyo qeybo ka mid ah Puntland ayuu u badnaa wixii ka dambeeyay burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya.
Dhowr bilood ka hor ayuu dib ugu laabtay magaalada Muqdisho waxaana halgan dheer oo caafimaadkiisa lagu raadinayo galay golaha abwaannada Soomaaliyeed.
Abwaan Xirsi Dhuux ayaa sheegay in ay ku dadaaleen sidii ay dowladda Soomaaliya u hirgalin lahayd in abwaanka caafimaad loo geeyo dalka dibaddiisa.
Hase ahaatee, mar uu BBC-da u warramayay isagoo u muuqday inuu ilmeynayo ayuu sheegay in eray uu Abwaan Baarleex ku yiri ka hor inta aan la qaadin uu hadda ogaaday inuu sagootin ahaa.
“Maalintii ugu dambeysay ee aan u duceyneynay golaha abwaannada intaan isu keennay, ka hor inta aan dibadda loo qaadin, ayuu goobta nooga tiriyay gabay dheer oo la yiraahdo ‘kala tage’. Waxaanan illaaweynin eray uu aniga igu xusay oo uu lahaa: “Kala tage tuslaha yuurura iyo tima caddow dhuux”, ma aanan dareemin inuu markii i sagootinayay laakiin hadda ayaan dareemayaa iney sagootis ahayd arrintaas.
Wuxuu abwaanku ku caan baxay gabayada waddaniga ah, saarka iyo dhaantada oo uu ku cabiri jiray xaaladaha taagan iyo majaajilada.
1970-meeyadii ayuu ku biiray ciidamadii qalabka siday ee Soomaaliya, isagoo ula tagay xirfaddiisa hal abuurnimo ee uu Eebe hibada u siiyay.
Waxaa lagu xasuustaa inuu gabayo badan oo guubaabo ah ku taageeray ciidamadii qaranka Soomaaliya ee ka qeyb qaatay dagaalkii dhex maray Soomaaliya iyo Itoobiya sannadkii 1977-kii.
Sidoo kale dad badan ayaa xasuusta dhaantadiisii uu kusoo hooriyay: “Qarsho weeyee qalbigu armuu nagu qarxaa?”.
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa umadda Soomaaliyeed ku hoggaaminaya tacsida loo dirayo ehelada iyo asxaabta Abwaan Cabdullaahi Xirsi Baarleex.
Previous articleMaayarada Berbera Iyo Hargeysa Oo Lagu Soo Dhaweeyey Dalka Belgium
Next articleDaawo Muuqalka”Garyaqaan Guuleed Oo Si Adag Uga Hadley Dhalinyaro Darbi Jiif Ah Oo Xukuumada Somaliland Xabsiga Dhigtay